Company Profile - Jiangnan CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd.
News na Ozi
ụlọọrụ ozi ọma
Drilling na ịme ọpịpị center
Elu nsogbu ihicha igwe
Kwụ machining center
Jiangnan CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd. e guzobere 2006. Ọ bụ a elu-tech oge a management enterprise ọkachamara na mwekota nke nnyocha, mmepe, n'ichepụta, ahịa na mgbe-sales ọrụ nke CNC machining emmepe, na mbubata na mbupụ ikike . The ụlọ ọrụ dị na Wenzhou, n'ụsọ oké osimiri nke East China Sea na a ukwuu mepụtara aku na uba. Ọ na-ekpuchi ebe nke 35 Mu na nwere ihe karịrị 25,000 square mita nke tozuru etozu ụlọ obibi. Na ihe karịrị 100 ukwuu ruru eru, elu-tech, elu-edu ọkachamara mkpara.
Jiangnan CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd.-agba mbọ ka azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "ndị ọkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ dị ka nduzi, technology ka na-eduga, ahịa na-agba mbọ". Ịgụ imekọ ihe ọnụ mmụọ nke "na-aghọgbu niile na-eme, na-agbalịsi ihe nke ọma na-etinye na mbụ ndị mmadụ", rube isi na-emeri na iwu nke elu amalite, elu ego na elu technology, na successively ịme n'elu n'ibu rigidity kwụ na vetikal CNC machining emmepe na CNC mkpọpu ala igwe usoro na kachasị bughi imewe. The ụlọ ọrụ nwere ụwa elu super nnukwu CNC pentahedron nhazi center na ibu ogologo na obosara gantry CNC Guideway grinder na elu kpọmkwem Renishau ule akụrụngwa. Ịgbaso enterprise echiche nke "Best Quality, Mutual Rite Uru Ahịa na ezi obi Service", ụlọ ọrụ agbaso àgwà iwu nke "Quality mbụ, Ahịa Mbụ", na obi dum na-enye magburu onwe ọrụ anyị ahịa.
Anyị ga-eji ihe kacha mma ngwaahịa mma na mma-eje ozi ahịa na enyi, guzosie ike a ike na anya doro quality echiche, na-akwado ọrụ mmụọ, na-elekwasị anya na isi uru, na-agbasonụ magburu onwe ya mma, mma, anọgidesi. Ọ bụ anyị ebighi-achụ nọgidere mma uru nke ụlọ ọrụ na-elu-àgwà ozi.
Vetikal machining Center, Wheel Hub machining Center, Vertical Machining Centre, Cnc Vertical Machining Centre,